Tag: usability kuyedza | Martech Zone
Tag: usability kuyedza
Tinofanira kuenda kumusangano weGo Inbound Marketing wakaitwa mudunhu neElemente Tatu. Chakanga chiri chiitiko chakanakisa chine mutsetse unoshamisa weanokurudzira uye vatauri vekudzidzisa. Mumwe wevatauri aive Oli Gardner, mubatanidzwa weUnbounce uyo akarongedza pamwechete heck yemharidzo pamusoro pekukosha uye kukanganisa kwekuyedza. Tichagovana imwe yemharidzo yakapihwa naOli mune zvakatumirwa kumberi, asi ini ndaida kugovana chimwe chishandiso
Visual Webhusaiti Optimizer chishandiso chekuyedza che A / B chinobvumidza nyanzvi dzekutengesa kuti dzigadzire akasiyana mawebhusaiti avo uye mapeji ekumhara vachishandisa poindi-uye-tinya mupepeti wobva waona iyo vhezheni inogadzira yakanyanya kutendeuka chiyero kana kutengesa. Visual Webhusaiti Optimizer zvakare inochinjika multivariate yekuyedza software (yakazara mafekitori nzira) uye ine huwandu hwezvimwe zvekushandisa senge hunhu hunongedzo, kupisa mepu, kushandisika kuyedzwa, nezvimwe A / B kuyedza - Kutaridzika gadzira akasiyana mavhezheni ewebhusaiti yako ne